Uma ay kicin Siyoon oo waxaa lagu burburiyay Auschwitz, Rebbe ayaa u sheegay in aanay kor u qaadin. Rabbi Michael Avraham
Uma ay kicin Siyoon oo waxaa lagu burburiyay Auschwitz, Rebbe ayaa u sheegay in aanay kor u qaadin.
Jawaabta > Qaybta: Iimaanka > Uma ay kicin Siyoon oo waxaa lagu burburiyay Auschwitz, Rebbe ayaa u sheegay in aanay kor u qaadin.
Xishood ka xishood La weydiiyey 5 bilood ka hor
Qoyskaygu way ku qanacsan yihiin inay Siyoon ku noqdaan. Aad bay hodan u ahaan jireen, oo waxba kama dhinnayn, taasoo daba socotay nacaybka quruumaha hareerihiisa ku wareegsan.
Rebbe wuxuu u sheegay inay ku sii jiraan masaafurinta, wuxuuna u ballan qaaday inay fiicnaan doonto.
Rumayso rebbe kuma soo noqon Siyoon iyo Efrayim ee Auschwitz XNUMX-aad iyo dhiiggii farcankoodii sidoo kale ka yimid rebbe ballan qaaday oo ballantoodii aawadiis loo baabbi'iyey.
Laakiin Yeremyaah XNUMX ka soo horjeeda nebiyada beenta ah waxay dhiirigelinayaan soo noqoshada Siyoon iyo Yeremyaah oo magaca Ilaah ku hadlaya maya.
Kaliya 70 sano oo kale
Oo hadda hab-dhaqankii waa beddelmay, Baabuloon waxay u badan tahay inaynu guryo ka dhisanno oo naago guursanno. Oo reer Yeruusaalemna ay laayaan oo ay gaajoodaan.
Haddaba maxaa sax ah?
Si aad ugu noqoto Siyoon ama si kale si aad u degto masaafuris?
Tani waa xajin adag. Wax walba iskiis. Rebbe oo sheegay in ra'yigiisa uusan u imaan sababo isaga u gaar ah, ayaa sheegay wax gebi ahaan sharci ah. Taas oo aakhirka khaldamay kuma waajibinayso natiijada. Ninna dhiiggiisu gacantiisa kuma yaal. Haddii uu ballan-qaadyo qayru-mas'uul ah sameeyay markaas waa laga yaabaa.
Sida nebiyada, waxay sheegaan wax macluumaad nebiyadu, sidaas darteed waxaa jira dood gebi ahaanba ka duwan. Hadday wax u ballan qaadaan waa magaca Rabbiga.
Guud ahaan, jawaabta su'aasha ah in la soo haajiray had iyo jeer ma aha jawaab isku mid ah. Mar waa sax in kor loo kaco marna maya. Inkasta oo uu jiro amar ah in la dejiyo dhulka, nebigu wuxuu ka saarayaa wax kasta oo Tawreed ah ee Holocaust ama saacadda.
Ku biir 3,088 macaamiil dheeraad ah
Ma loo ogol yahay inuu ku biiro Illuminati?
Miis baa la dhigay
Codsiga  ku biir illuminati whatsapp / [+27833428710],  noqon illuminati in kurman klerksdorp mmabatho mafikeng suncity potchefstroom zeerust brits zeerust Rustenburg swartruggens hartbeespoort, Codso in ay ku biiraan illuminati +27833428710 Netherland luxembourg sweden United Kingdom Austraia Malta Slovenia russia portugual Czech Republic Island greece spain dermark italy Ma waxaad tahay Wadaad, Siyaasi, Nin Ganacsade ah ama naag ah, Fanaaniin ama Fanaanad, ma doonaysaa in aad caan noqoto ama waxa aad doonaysaa in aad taajir noqoto ama aad awood yeelato waxa aad ku gaadhi kartaa riyooyinkaga adiga oo xubin ka ah Illuminati intaas oo dhan riyadaada iyo qalbigaaga rabitaanka si buuxda ayaa loo fulin karaa. Dadku waxay sheegaan in Illuminati ay si gaar ah hodan u yihiin. Taasi run ma tahay? Waa run in dhammaan laba-iyo-tobanka xubnood ee Golaha Xukunku ay qani yihiin, laakiin lacag annagu, si fudud u maalgeliso hawshayada iyo Xubnaha bulshadeenna wax kale ma nihin. Ma nihin kuwa caabuda Mammon, sida eedaysanayaashayadu rumaysan yihiin. Xor baad ku dhalatay oo xor baad ku dhimateen laakiin xor ma noolaan doontaan? Ilaa inta caado iyo joogtayn ay tilmaamayaan qaabka nolosha ee cabbirada cusub ee nafta waxay ogaan doonaan isku-dhafka. "Hantida" Illuminati waxay ku jirtaa qaab khasnado iyo lacag aan qiimo lahayn. Qaar ka mid ah xubnaha Illuminati waxay heleen hanti badan; qof kastaa wuu ku biiri karaa inta aad sirta ilaalinayso? Tani waa fursad xiiso leh oo aad ku biirto Bulshada Illuminati si aad hadda u codsato Xubinimada! Dhammaan ragga iyo dumarka waa lagu soo dhaweynayaa inay ku soo biiraan Macbadka Kaliya ee guuleysta, la ixtiraamo iyo moodooyinka ugu qanisan, DJ-yada iyo Rappers ee Adduunka. Fursad xiiso leh ayaa u soo baxday qof walba si uu ugu biiro bulshada qarsoodiga ah ee illuminati. Siyaasiyiinta kaalay oo marag ka noqo. Keen magaca kuwa ku caashaqay ama saaxiib oo arag isbeddellada ragga iyo dumarka ganacsatada ah ka heleen bulshada illuminati. Ardayga kaalaya oo nadiifi mustaqbalkaaga. faqriga ka bax. Ka bax dariiqa faqriga oo u gal dariiqa barwaaqada hadda. Haddii lacagtu ay cidhiidhi ku jirtay oo arrimuhu aanay si fiican u socon dhaqaale ahaan, bulshadeena Illuminati waxay awood kuu siin doontaa inaad beddesho noloshaada oo aad noloshaada si buuxda ugu noolaato. Wac: +27833428710. Email: joinilluminatisa@gmail.com
Moshe Oppenheimer Daaran Jawaab ma loo ogolyahay in lagu biiro Illuminati?
Michi Daaran Iran ma halkan? Ku saabsan Horumarka iyo Liberalism-ka Sane (Column 483)
raaxaysi Daaran Iran ma halkan? Ku saabsan Horumarka iyo Liberalism-ka Sane (Column 483)
Ku hadal wakhtiga Daaran Iran ma halkan? Ku saabsan Horumarka iyo Liberalism-ka Sane (Column 483)
Emanuel Daaran Iran ma halkan? Ku saabsan Horumarka iyo Liberalism-ka Sane (Column 483)